Iska yaree isticmaalka CPU-ka ee Tumblerd gudaha Xubuntu 12.10 | Laga soo bilaabo Linux
RafaGCG | | GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waxaan ogaaday in howsha tumasho Waxaan cunay 2 xadhig oo ah nidaamka processor. tumasho waa waxa uu adeegsado Xfce si loo muujiyo sawirka iyo fiidiyowga yar yar, oo markay bilaabaan inay soo saaraan iyaga, gaar ahaan cajaladaha aad u waaweyn, way cunaysaa xoogaa yar.
Sidee loo saxaa tan?
Hordhaca waa inuu dansan yahay.
Wax walbana waxay ku soo noqdaan caadi markii dib loo bilaabay.
In kasta oo hadda markii la daalacanayo tusaha, thumbnails ay ku jiraan waxa ka muuqda ma muuqdaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Yaree Isticmaalka Tumblerd CPU ee Xubuntu 12.10
Waxay noqon kartaa wax Xubuntu ah ... Waxaan haystay 2 dun oo hadhay 100% markasta.
Haddiise aad google-ka ku dhacdo waxay ku dhacday isticmaaleyaal badan. Uma muuqato inay isku dayayso inay xirto galka.
Hagaag, waligey dhibaatooyin iima siin. Marka kaliya ee ay kicineyso waa hadii aan soo dejinayo fiidiyoow (durdur ama waxkasta) oo aan ku istaago galka meesha laga soo dejinayo. Waana wax macquul ah inay gubto maxaa yeelay daemon wuxuu isku dayaa inuu cusbooneysiiyo aragtiyada isbeddel kasta oo feylka fiidiyowga ah. Xalka: xidho galka!
Laakiin waligaa ha joojin habka muuqaalka. Waa sidaan oo kale maahan inaad yaraynayso isticmaalka laakiin waa inaadan isticmaalin aaladda gabi ahaanba.
Waxay la mid tahay adigoo dhahaya "Sida loo yareeyo isticmaalka KDE" iyo ka jawaabista "Ha rakibin KDE"
PS: Waxaan dhigay "KDE" si aan wax u dhigo.
Hagaag, maadaama aan ahay dad wanaagsan, waxaan kuu sheegayaa sida aad u xadidi karto isticmaalka wax:
Ka dibna waxaad maamushaa barnaamijka. Waxaan u isticmaalaa pidgin maxaa yeelay isticmaalkayga ayaa marmar cirka isku shareera mararka qaarkood sabab la'aan. Waa kan faylkayga pidgin.sh
Taasi waxay u qoondeyneysaa 20% isticmaalka ugu badan ee processor-ka pidgin, ka dibna wuu socodsiiyaa oo wuxuu dilayaa xaddidaha markii la dhammeeyo. Kuma aanan isku dayin daemons, laakiin ma arko sababta aysan u shaqeyn karin.
Waxay ahayd inuu soo baxo
cpulimit -e WAXYAABEY -l WAXYAABO &
laakiin waxaan isticmaalay ka sii weyn iyo ka sii hooseeya waana tirtiray markii aan dhajiyay.
talo aad u xiiso badan Giskard, waxaan u maleynayaa inay la shaqeyn laheyd daemons hadaad dhigto .xinitrc sax miyaa?
Haa. Waa waxa aan u malaynayo sidoo kale. Dhigitaankeeda waa inay la shaqeysaa wax kasta oo daemon ah oo halkaas yaal.
Hagaag, dib ugu noqo sagaashannadii ...
Waxaan la jiraa faallooyinka koowaad, adigu ma dhimeysid isticmaalka, waxaad joojineysaa adeegsiga aalad, sikastaba dhib iima siiso, ama ma arko.
By the way, Thunar had iyo jeer waxaa laga codsanayaa inay muujiyaan thumbnails of videos waana horey u haynaa, MAHADSANID thunar, ugu yaraan runtii waan u baahanahay, laakiin hadda way fiicnaan lahayd haddii thumbnails of videos ay ka duwanaan lahaayeen sawirada. Waan arkay inaad calaamado dhigi kartid laakiin qorshe maahan inaad feyl walba astaan ​​ku dhigto.
gudaha Mageia 2 Gnome-Shell waxaan isticmaalayaa ffmpegthumbnailer halkii aan kaheli lahaa totem waxayna soo saartaa daawashada fiidiyowga oo aad u dhaqso badan.
Haddii aad eegto qabashada ugu horreysa waxaad arki doontaa hannaanka oo sahlan.
Ma aqaano haddii ay tahay arrin ku saabsan waqtiga mashiinka. Nidaamyada isku midka ah ayaa la qabqabtay maalmo waana wax gaar ah. Ama wax u gaar ah Xubuntu, waxaa laga yaabaa inaan sii hubiyo ka hor intaan dhajinta.
Ku saabsan waxa ku qoran qoraalka. Waxaan aad ula yaabay in qoraalka iyo macnaha qoraalka wax badan laga beddelay, daabacaadda ka hor dhexdhexaadnimo. Uma doonaynin inaan wax idhaahdo, laakiin markaa waxaan moodayay inay akhristayaashu sidoo kale xaq u leeyihiin inay ogaadaan. Laakiin ma arko baahi loo qabo in aan ka hadlo, ma doonayo dhibaato, muran iyo sharraxaad. Kafiican xitaa kahadalka arintaas fadlan. Kama xanaaqsan yahay ama ma xanaaqsana. Laakiin dhab ahaantii ma sii daabici doono, waa tan ugu wax ku oolka badan, ma ahan musiibo in aan noqdo heerka aasaasiga ah. Waxba kaagama maqna. Waqtigana waan uqaadan doonaa si aan u aqriyo uganaqeyb qaato faallooyinka wanaagsan ee kuwa kale.
Waan sii wadi doonaa kaqeyb qaadashada, faallaynta iyo ku raaxaysashada balooggan aadka u wanaagsan iyo dadkiisa maxaa yeelay waxba ma dhicin, waa wax fudud oo anectoda ah Ha siin xarig mawduuca fadlan.
Casharrada "GIMP] si loo abuuro Saamaynta" Guridda "